That's so good, right?: Erectile dysfunction (ED) ပန်းသေ-ပန်းညှိုး
Fri, Dec 30, 2011 at 7:10 PM
ကျွန်တော် အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပါပြီ အိမ်ထောင်မကျသေးပါ။ အခု ပန်းသေပန်းညိူးရောဂါ ခံစားနေရပါတယ်။ စဖြစ်တာကတော့ ၂ဝ၁ဝ စက်တင်ဘာလလောက်ကပါ။ ဘယ်လိုကဘယ်လိုစဖြစ်သလဲတော့ မသိပါ။ အခုထိလည်း သက်သာလာခြင်း မရှိသေးပါ။ ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ လိင်မသန်မာတောဘူး၊ စိတ်ကပါပင်မဲ့ လိင်တန်တောင့်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ၁ မိနစ်လောက်ဆိုရင် ပြန်ကျသွားပါတယ်။ ဆီးသွားရတာလည်း ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့။ ခါးကလည်း တောင့်တင်းနေပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ ဥကို စမ်းကြည့်လိုက်ရင် အကြောထုံးလိုလိုဟာကိုလည်း စမ်းမိပါတယ်။ လူကြီးများကတော့ မြန်မာလို မုတ္တရောင်တယ်ဆိုပြီး တိုင်းရင်းဆေးဆရာနဲ့ နှိပ်ခိုင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မပျောက်ဘူး။ ကျွန်တော် နာတာမခံနိုင်တော့လို့ တခေါက်ဘဲသွားပြီး မသွားတော့ပါ။ ပြီးတော့ ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကို ပြကြည့်တောလည်း လူပျိုဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးပြင်းတာတွေ မပေးချင်လို့ ရိုးရိုး အားဆေးတွေ ပေးသောက်ခိုင်းပါတယ်။ လုံးဝကို မသိသာပါဘူး။ နှစ်ခေါက်လောက်သွားပြီးနောက် မသွားတောပါ။ ကျွန်တော်ကို အိမ်က မိန်းမယူခိုင်းနေပါပြီ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကျအောင် ကိုယ်ဘာသာကိုယ် အားပေးနေလာတာ တနှစ်ကျော်လာပါပြီ။ အခုအခြေအနေမှာတော့ ပြန်လည်သန်စွမ်းပါဦးမလားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတောင် ဝင်မိပါတယ်။ ဆရာဝင်ရေးနေတဲ့ site တွေ မြန်မာပြည် ဘန်းထားလို့ ဝင်ရတော တော်လေးကြည့်ရခက်လို့ တက်နိုင်ရင် မေးလ်ထဲကို သောက်ရမည့်ဆေးများ သင့်တော်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ပေးပါရန် တောင်ပန်ပါတယ်။
အထဲကနေ အဖတ်ရ မလွယ်ဘူးဆိုလို့ (ဘလော့ခ်) ရော (ဝက်ဘ်ဆိုက်) ပါ လုပ်ထားပါတယ်။ သတင်းတွေမှာတော့ အများကြီး ကောင်းလာပြီ၊ တိုးတက်နေပြီလို့ ကြားရ ဖတ်နေရတယ်။ ခုထိလဲ အဲလိုဘဲလားဗျာ။
ရေးပြီးသာတွေ ပို့လိုက်ပါတယ်။ မပူပါနဲ့ ဒီအသက်မှာ ပန်းသေ မဖြစ်လောက်ပါ။
၁။ Early ejaculation (1) သုက်လွှတ်စောခြင်း (၁)
၂။ Male orgasm ယောက်ျား ပြီးခြင်း
၃။ Early ejaculation (2) သုက်လွှတ်စောခြင်း (၂)
၄။ Varicocele (ဗေရီကိုဆီးလ်) တွေ ပို့လိုက်ပါတယ်။ ကပ်ပဲအိတ်မှာ ဖြစ်နေတာကို တိတိကျကျလေး ပြောပါအုံး။ ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ်။ ဆေးကုလို့ရပါတယ်။
Erectile Dysfunction ကို Impotence လို့လဲခေါ်တယ်။ "လိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ဘို့ရာ ကျား-လိင်အင်္ဂါ လုံလောက်အောင် မသန်မာနိုင်တာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အပြည့်အဝ မဖြစ်နိုင်တာ" လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါသန်မာမှုဆိုတာ Hydraulic effect (ဟိုက်ဒရောလစ်) တံခါးမျိုးလိုဘဲ လိင်တံထဲကို သွေးတွေ စီးဝင်လာရာကနေ ဖြစ်လာစေတယ်။
Penile erection လိင်အင်္ဂါသန်မာဘို့ရာ ဖြစ်စဉ် ၂ ခုရှိပါတယ်။
(၁) Reflex erection ဆိုတာ လိင်အင်္ဂါကို ထိကိုင်တဲ့အခါ တုံ့ပြန်မှု၊ Peripheral nerves အဖျားပိုင်းက အာရုံကြောတွေနဲ့ ခါးဆစ်ထဲက အာရုံကြောတွေကနေ လုပ်ပေးတယ်။ လိင်အင်္ဂါကို ထိကိုင်တာနဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကြောင့် Nitric oxide (နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုက်) တွေ ထွက်လာစေတယ်။ သူ့ကြောင့် လိင်တံထဲမှာရှိတဲ့ Corpora cavernosa ထဲမှာရှိတဲ့ Smooth muscles အနုစားကြွက်သားတွေ Relaxation ပျော့ကျယ်လာစေမယ်။
(၂) Psychogenic erection စိတ်ပိုင်းကနေ လုပ်ပေးတာ။ Sexual arousal လိင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကနေ အစပျိုးတယ်။
ကျား-အစိကနေလဲ Testosterone (တက်စတိုစတီရုန်း) ဟော်မုန်း ကိုထုတ်ပေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ Pituitary gland (ပစ်ကျူထရီ) အိတ်ကလေးကလဲ သူ့အလုပ်သူ ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ဘို့ လိုသေးတယ်။
4. Psychological problems စိတ်အခြေအနေမှာ အားနည်းချက်ရှိရင် ပန်းညှိုး-ပန်းသေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းခံတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
• အသက် ၆ဝ ကျော်သူတွေမှာ ၄ဝ ကျော်တွေထက် ၄ ဆ ပိုဖြစ်တယ်။
• ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်နိုင်တာ၊
• Atherosclerosis သွေးကြော မာ-ကျဉ်းရောဂါ၊
• Alcohol and tobacco use မူးယစ်ဆေးစွဲ၊ အရက်စွဲ၊
• Hypogonadism ဟော်မုန်းနည်းတာ၊
• Testosterone (တက်စတိုစတီရုန်း) ဟော်မုန်း နည်းနေတာ၊
• Arsenic poisoning (အာဆင်းနိတ်) အဆိပ်သင့်တာ၊
• ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်တာတွေထဲမှာ (SSRIs) စိတ်ကျဆေးတွေ နဲ့ Nicotine (နီကိုတင်း) မူးယစ်ဆေးတွေက အများဆုံး ဖြစ်တယ်။
• Spinal cord ခါးရိုးဆစ် ထိခိုက်တာ၊ Brain injuries ဦးနှောက်ထိခိုက်တာ၊ Parkinson's disease (ပါကင်ဆန်) ရောဂါ၊ Alzheimer's disease (အယ်လ်ဇိုင်းမား) ရောဂါ၊ Multiple sclerosis (မာလ်တီပယ်-စကယ်လရိုးဆစ်) ရောဂါ နဲ့ Stroke (စထုပ်ခ်) ရောဂါ၊ Cavernosal disorders (Peyronie's disease) ရောဂါတွေ ရှိနေတာ။
• Colon အူမကြီး၊ Prostate ဆီးကျိတ်၊ Bladder ဆီးအိမ်၊ Rectum အစာဟောင်းအိမ်တွေမှာ ခွဲစိတ်တာ၊ ဓါတ်ကင်တာ၊
• Psychological causes စိတ်အခြေခံတွေကတော့ Performance anxiety လက်တွေ့စိုးရိမ်စိတ်၊ Stress စိတ်ဖိအား များခြင်း၊ Clinical depression တကယ့်စိတ်ကျရောဂါ၊ Schizophrenia (စကစ်ဇိုဖရီးနီးယား)၊ Substance abuse ဆေးစွဲခြင်း၊ Panic disorder (ပင်းနစ်) ထိန်းမနိုင်-သိမ်းမရ စိတ်ရောဂါ၊ Generalized anxiety disorder အထွေထွေ စိတ်ကျခြင်း၊ Personality disorders (ပါဇင်နယ်လ်တီ) တကိုယ်ရေစိတ်ရောဂါ၊ Negative feelings အဆိုးမြင်စိတ်တွေ၊
• ၂ဝဝ၂ သုတေသနတခုအရ စက်ဘီးစီးတာနဲ့လဲ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။
• ၂ဝ၁၁ သုတေသနတခုအရ NSAIDs အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၃ လမက သောက်သူတွေဟာ ၂၂% ပိုဖြစ်တာ တွေ့ရတယ်။
• Nocturnal penile tumescence (NPT)
• ယောက်ျားတယောက်ဟာ အိပ်နေတုံး (REM) အဆင့်အတွင်းမှာ လိင်သန်မာမှု ၅-၆ ကြိမ်ဖြစ်တာ ပုံမှန်ပါ။ အဲလိုမဖြစ်ရင်
• Nerve function နဲ့ Blood supply တွေ ချို့ယွင်းနေမယ်။
• Snap gauge နဲ့ Strain gauge ကရိယာတွေနဲ့ တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်တယ်။
• Penile biothesiometry စမ်းသပ်နည်း၊
• Dynamic infusion cavernosometry (DICC) နည်း၊
• Corpus cavernosometry နည်း၊
• Magnetic resonance angiography (MRA) နည်း။
Treatment ဘာလို့ဖြစ်သလဲအပေါ် မူတည်ပြီး ကုသရတယ်။
• Arsenic poisoning (အာဆင်းနိတ်) အဆိပ်သင့်သူတွေမှာ Potassium (ပိုတက်ဆီယန်) ဓါတ်ဆား နည်းနေတာကို ပြင်ပေးရတယ်။
• Injection therapy (Papaverine, Phentolamine, Prostaglandin E1) ဆေးကို လိင်အင်္ဂါမှာ ကိုယ့်ဖါသာ ထိုးရတယ်။ Alprostadil (Alprostadil, Caverject Impulse, Edex)
• Penis pumps (Vacuum constriction device) (ပန့်ပ်) ကရိယာ သုံးမယ်၊ (ရေးထားပါတယ်)
• Testosterone replacement (တက်စတိုစတီရုန်း) ဟော်မုန်းပေးခြင်း၊
• Phosphodiesterase type5inhibitors = Sildenafil (Viagra), Vardenafil (Levitra) နဲ့ Tadalafil (Cialis) ဆေးတွေက အင်မတန် ထိရောက်တယ်။ ရေးထားပါတယ်။ (ရေးထားပါတယ်)
• Alprostadil (Vitaros) cream လိမ်းဆေးလဲ ကနေဒါမှာ ခွင့်ပြုချက် ရထားတယ်။
Alternative medicine တခြားနည်းတွေ ရှိပေမဲ့ FDA ကနေ အသိအမှတ်ပြုပေးမထားပါ။
Testosterone deficiency (တက်စတိုစတီရုန်း) ဟော်မုန်းနည်းနေသူဟာ
- လိင်စိတ်လာတာ နည်းနေမယ်၊
- နေမကောင်း ထိုင်မသာဖြစ်နေမယ်၊
- စိတ်ဓါတ် ကျနေမယ်၊
- အာရုံစိုက်ရတာ မှတ်သားရတာ အားနည်းနေမယ်၊
- ကိုယ်ခန္ဓာလဲ ပိန်လှီနေမယ်၊
- Cholesterol metabolism (ကိုလက်စထော) အလုပ်မမှန်ဖြစ်နေမယ်၊
- Anemia သွေးအားနည်းနေမယ်၊
- Osteoporosis အရိုးအားနည်းနေမယ်၊
- ကိုယ်မွှေးပေါက်တာ ပါးနေမယ်၊
Testosterone နည်း-မနည်း သွေးစစ်ရင်သိမယ်။ မနက်ခင်းမှာ စမ်းတာပိုကောင်းတယ်။ နည်းနေသူတွေကို
Testosterone ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
- Acne အဆီပြန်မယ်၊ ဝက်ခြံပေါက်မယ်၊
- Fluid retention ဆီးအသွားရခက်နိုင်တယ်၊
- Breast enlargement ရင်သားထွားမယ်၊
- Sleep apnea အိပ်ရေးပျက်မယ်၊
- Testicular size ကျား-အစေ့ သေးသွားနိုင်တယ်၊
- Cholesterol ကိုလက်စထော အနည်း-အများပြောင်းမယ်၊
- Increase in red cell count သွေးနီဥများမယ်၊
- Decrease in sperm count သုက်ပိုးနည်းစေပြီး ကလေးမရဖြစ်စေနိုင်တယ်၊
- Lifestyle လူနေမှုဘဝ ပုံစံပောင်းသင့်ရင် ပြောင်းပါ။ ဥပမာ Smoking ဆေးလိပ်၊ အရက်ဖြတ်ပါ၊ Lose weight ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပါ၊ Aerobic exercise (အေရိုးဘစ်) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ပိုကောင်းစေမယ်။
ရောဂါအခံတွေလဲမရှိ၊ ပြောခဲ့တာတွေကိုလဲ ပြင်လို့မှ မရသေးရင် Psychological counseling (Stress, Anxiety or Depression) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှု ခံယူပါ။ သက်သာ-ကောင်းမွန်-ပျောက်ကင်းစေမှာ အမှန်ပါ။
Posted by Alex Aung at 2:53 PM